‘महिनावारी हुँदा’ मोडलको जागिर चट्
एक मोडलले कार निर्माता कम्पनी ह्युन्डेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दै महिनावारी भएका कारण उनलाई जागिरबाट निकालेको दाबी गरेकी छन् । २७ वर्षीया रिचेल रिकेर्टका अनुसार अप्रिल महिनामा न्युयोर्क इन्टरनेसनल अटो शोमा ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्दा उनलाई लज्जित अनुभूत गराइएको थियो । त्यत्तिबेला उनले आफूलाई ट्वाइलेट ब्रेकको आवश्यकता भएको स्पष्ट बताएकी थिइन् । तर, त्यत्तिबेला उनलाई समय उपयुक्त … Read more
५६ मिनेटमा पैदलै घुमेर सकिन्छ यो देश
पैदल हिँडेरै केही मिनेटमै एउटा पूरै देश घुम्न सम्भव होला ? सुन्दैमा अचम्म लाग्नसक्छ, एउटा यस्तो देश पनि छ दुनियामा जुन ५६ मिनेटमा पैदलै घुमेर सकिन्छ । फ्रान्स नजिकै रहेको मोनाको नामक देश दुनियाको दोश्रो सानो देश हो । यो देश फर्मुला वान कार दौड, ग्लामरस क्यासिनो, शुन्य आयकर, सुरक्षा तथा सुविधा अनि चौबिस घण्टे … Read more
यौन खेलौना खरिद गर्नेमा अस्ट्रेलियन महिला अग्रस्थानमा रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यौन खेलौना बिक्री गर्ने लभहनीले आफूले बिक्री–वितरण गर्ने ६ देशका ४ लाख प्रयोगकर्तामा गरेको सर्वेक्षणबाट उक्त तथ्य देखा परेको हो । सोही सर्वेक्षणअनुसार अस्ट्रेलियन महिलाले अमेरिकी महिलाको तुलनामा ३ गुणा बढी कामोत्तेजक पहिरन खरिद गर्ने गरेका छन् । अस्ट्रेलियालगायत जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रान्स, … Read more
महिलाहरु सपनामा सम्भोग गरेको देख्छन् किन ?
पछिल्लो अध्ययनले महिलाहरुमा सम्भोगसँग जोडिएको सपना देख्ने दर बढिरहेको देखाएको छ । क्यानडाको युनिभर्सिटी अफ मोन्ट्रियलका विज्ञहरुले गरेको अध्ययनका क्रममा अहिलेका महिलाहरुले सपनामा यौन क्रियाकलाप गर्ने गरेको देख्ने दर ४० वर्ष अघिका महिलामा भन्दा निकै धेरै रहेको पाइएको छ । अध्ययनका क्रममा महिलाले देख्ने सपना मध्ये ८ प्रतिशत सेक्स सँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् ।अध्ययनका … Read more
महिलाको योनीबाट आईफोन चार्ज !
मोबाईल कसरी चार्ज गर्न सकिन्छ ? सामान्यतया मोबाइल, विजुली र विद्युतिय उपकरणको सहायताले गर्न सकिन्छ । तर, एक अमेरीकी महिलाले योनीको सहायताले मोबाइलको ब्याट्री चार्ज गरेर दुनियालाई चकित बनाइदिएकी छन् । उनले यसरी आईफानलाई योनीको सहायताले चार्ज गरेर देखाएपछि यो विषय इन्टरनेटमा भइरल बनेको छ । आर्ट ग्यालरीमा एक युवाले लिना माइकुश नाम गरेकी युवतीको … Read more
महिला र पुरुषबीच ‘अर्गाज्म ग्याप’ किन हुन्छ ?
विभिन्न अध्ययनमा यौन सम्बन्धका क्रममा महिलाले कम चरम आनन्द (अर्गाज्म) प्राप्त गर्ने देखिएको छ। यौन आनन्द प्राप्त गर्ने सवालमा महिला र पुरुषबीच यो अन्तर (अर्गाज्म ग्याप) किन हुन्छ भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरुले विभिन्न राय दिएका छन्। यौनमा चरम आनन्द प्राप्त गर्ने मामिलामा विश्वभरका करिब ४० प्रतिशत महिलाले ‘सेक्सुअल डिस्फंक्सन’को अनुभव गर्दछन्। ‘समलिंगी, द्वीलिंगी, विपरीतलिंगी, सबै प्रकारका … Read more
बढी सुन्दर हुनु भयो यी युवतीका लागि अभिषाप
हरेक स्त्रीको चाहना हुन्छ सुन्दर देखिने । सुन्दर देखिनका लागि के के सम्म गर्दैनन् उनीहरु रु तर यहाँ एकजना केटीका लागि चाहीँ उनको सुन्दरता नै अभिषाप बनिरहेको छ । आफ्नो अत्यधिक सुन्दरताले उनलाई समस्या सिर्जना गरेको छ, बन्धन बनेको छ । उनी जहाँ जान्छिन्, मानिसहरु उनलाई घेर्न दाल्छन् र फोटो खिच्न थाल्छन् । यिनको तस्वीर … Read more
जहाँ भगवनको हैन स्तनको पूजा हुन्छ
नेपालमा पनि विभिन्न थरीका मन्दिर तथा शक्तिपिठहरु रहेका छन् । कोही पहाडमा छन् त कोही नदिको बीचमा समेत । शक्तिपिठहरुमा देवी देवताका विभिन्न विशेष अंगहरुको समेत पूजा हुन्छ । जापानमा एउटा यस्तो मन्दिर छ जहाँ भगवानको होइन स्तनको पुजा हुन्छ । उक्त मन्दिर स्तनकी देवी छिछिगमिसमको नामले चिनिन्छ । यो मन्दिरमा वर्षौँदेखि स्तनको पुजा हुँदै … Read more
परम्परा जोगाउन भन्दै सुरु गरियो निर्वस्त्र स्कुल
जापानीहरु सदैव आफ्नो अनौठो हर्कतका लागि चिनिन्छन् । फेरि यस्तै अनौठो समाचार आएको छ । यो पछिल्लो खबर चाहीँ सामुहिक स्नानघरको हो । राजधानी टोकियोमा रहेको हिनोदेयु बाथ हाउस नामक सामूहिक स्नानघर यसकारण चर्चित छ की यहाँ मानिसहरुले निर्वस्त्र रुपमा सामूहिक रुपमा नुहाउने गर्दछन् । यो सुन्दैमा अनौठो लाग्दछ । खासगरी जापानी युवाहरुलाई आकषिर्त गर्नका … Read more
मानिसले कुनै पनि आवश्यकता पूरा गर्नका लागि केही चिजहरु लिलाम गरिरहेका हुन्छन् । तर, १८ वर्षकी एक युवतीले आफ्नो पढ़ाई खर्च जुटाउनका लागि कुमारीत्व लिलाम गर्न लागिरहेकी छन् । किम नाम गरेकी एक युवतीले एक वेबसाइट मार्फत कुमारीत्व लिलाम गर्ने प्रयास गरेकी हुन् । जुन वेबसाइटमा उनले अहिलेसम्म शारीरिक सम्पर्क पनि नगरेको जनाइएको छ । … Read more